Kismaayo: Shirkii Madasha Wadatashiga Qaran oo markii labaad lagu kala kacay -WARBIXIN | shumis.net
Home » News » Kismaayo: Shirkii Madasha Wadatashiga Qaran oo markii labaad lagu kala kacay -WARBIXIN
Kismaayo: Shirkii Madasha Wadatashiga Qaran oo markii labaad lagu kala kacay -WARBIXIN
Wararka aan ka heleyno ilo ku dhaw shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee Kismaayo ka socdey tan iyo maalintii Khamiista ayaa hadda taagan heer rajo beel ah kadib markii dhinac ka mid ah dhinacyada shirka laga waayey wax tanaasul ah.
Maalintii shalay waxaa Kismaayo gaarey Safiirka Dalka Isutagga Imaaraadka Carabta Soomaaliya u fadhiya Sheikh Maxamed Al-Cusmaan, waxaana uu ku dhiirigeliyey in Siyaasiyiintu aysan kala tegin maalintii Sabtida, kadib markii wada hadalku bur-buray ee ay go’aan gaaraan taas oo sababtey inan shirarku si gooni gooni ah u socdaan.
Maamulada Puntland & Jubaland ayaa mar kale soo jeediyey qorshe tanaasul ah kaas oo leh Road Map. Labada maamul ayaa sheegay in ay oggolaan karaan in Aqalka hoose lagu soo xulo nidaamkii hore ee 4.5 sida labada maamul ee kale ay doonayaan, waxay ku xireen shuruud ah:
In la saxiixo in aan mar danbe dib loogu noqon karin 4.5 oo ay tahay markii u danbeysey
In Dowladda imaaneysa loo sameeyo Road Map ku aadan gaaritaanka doorasho hal qof iyo hal cod ah sanadka 2020.
Sidoo kale Jubaland & Puntland ayaa soo jeediyey in Aqalka sare la sameeyo ka hor inta aysan muddadu ka dhamaan Aqalka hoose ee hadda jira isla markaana lagu soo xulo 18-kii gobol ee Dastuurku aqoonsan yahay, iyada oo 54 Xildhibaan ay ku imaanayaan doorashooyin ergooyin ah.
Qodobka 72 ee dastuurka federaala ayaa ka hadlaya qaabka lagu soo xulayo Xildhibaanada Aqalka sare
Tanbaasulka Jubaland & Puntland ayey ku sheegeen in uu dhinackasta u noqon karo “Win-Win Situation”, oo dhinac kasta guulesytey isla markaana laga gudbo caqabadda taagan.
Maamulada Galmudug & Koonfur Galbeed ayaa ku adkeystey in Aqalka sarena ay ku yimaadaan nidaamka Dowlad Goboleedyada ee aan lagu saleyn 18-ka Gobol ee dastuurku aqoonsan yahay.
Waxaa la soo jeediyey aragti oraneysa in Xildhibaanada Aqalka Sare la gaarsiiyo 75 Xildhibaan kiuwaas oo tirada loo kordhinayo Puntland iyo Somaliland. Tirada la kordhiyey ayaa ah, in Somaliland loogu daro 11 Xildhibaan halka Puntland loogu darayo 8 Xildhibaan, taas oo ka dhigeysa tirada guud ee Aqalka Sare 75 Xildhibaan. halka Aqalka hoosena lagu soo xulayo 4.5.
Ergooyinka Puntland qaar kamid ah ayaa Horseed u sheegay in waxa ay raadinayaan aysan ahayn tiro badni ee ay raadinayaan in laga baxo nidaamka ragaadiyey Soomaaliya.
Raysalwasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo isagu ahaa dhex-dhexaadiyaha ugu badan ee dhinacyada la kala kulmaameyey ayaa u sheegay in isaga culeys badan saaran yahay oo Beesha caalamku ay la soo xiriireyso lana doonayo in xal la gaaro oo aan la kala tegin, laakiin waxa uu la kulmey albaab xiran oo aanu dhaafi karin.
Raysalwasaaraha Soomaaliya Sharmaarke ayaa si kooban saxaafadda kula hadley magaalada Kismaayo waxa uu sheeegay, in shirkii la soo gebagebeeyey, arrimo farsamona ay jiraan u baahan in dib loogu noqdo waxaana uu sheegay in shirka loo ballamey muddo kale, wixii faahfaahin ahna uu jeedin doono marka uu tago Muqdisho.
Mid kamid ah ergooyinka shirka ka qayb-galayey ayaa Horseed Media u sheegey in aysan jirin xitaa War-murtiyeed shirka ka soo baxaya ilaa iminkana aysan muuqan saansaantaasi, maalinta berri ahna ay dib ugu noqonayaan Garoowe.
Barlamaanka Soomaaliya waxaa muddada xilka uga harsan 7 bilood, ka hor bisha Luuliyo 2016 waxaa la doonayaa in la helo laba Baarlamaan oo kala sareeya, waxaana hadda la is weydiinayaa sida ay suurtagal ku noqon karto dhamaystirka hawlaha qabyada ahaa saddedxdii sano ee la soo dhaafey muddo aad u yar gudaheed?.
Si kastaba waxaa hadda la filayaa in hanaanka wadahadalka ay la wareegaan beesha caalamku isla markaana gacmaha la maroojiyo Siyaasiyiinta Soomaalida.
Title: Kismaayo: Shirkii Madasha Wadatashiga Qaran oo markii labaad lagu kala kacay -WARBIXIN